Michael Kors- 4-Pc. Eau de Parfum Gift Set
Michael Kors- 4-Pc. Eau de Parfum Gif...
Michael Kors ရဲ ့နာမည်ကြီး ရမွှေး၄ မျိုးကို စုထားတဲ့ sample set လေးပါ။
Eau De Parfum အမျိုးစားမို ့ရေမွှေးအဆီပါဝင်မှုများတယ်။ ကြာရှည် အနံ ့စွဲတယ်။
Made in Switzerland, Made in U.S.A မို ့Qualtiy ရှယ်ကောင်းပေါ့။
ရွှေရောင်ဗူးလေးနဲ ့သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထည့်ထားလို ့လက်ဆောင်ပေးလို ့လဲ ကောင်းတယ်။
Wonderlust Eau de Parfum, 0.14-oz. (Made in Switzerland)
Wonderlust Sublime Eau de Parfum, 0.14-oz. (Made in Switzerland)
Sexy Amber Eau de Parfum, 0.14-oz (.Made in Switzerland)
Michael Kors Eau de Parfum, 0.17-oz. (Made in U.S.A)